“HOGGAAN & HOGAAMIYE”.... W/Q: Axmed Maxamed Xasan - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > “HOGGAAN & HOGAAMIYE”…. W/Q: Axmed Maxamed Xasan
May 14, 2018 admin1881
“HOGGAAN & HOGAAMIYE”
Afeef: qormadan ma aha mid ka hadlaysa hogaamiye gaar ah, ee waa aragti gaar ah oo qeexaysa mancaha & astaanta erayada hoggaan & hogaamiye. Hoggaan: Sida uu qeexayo qaamuuska af-soomaaliga erayga hoggaan waxaa lagu macneeyaa.
Hogaamiye ama Hoggaanshe: waa qof dad ama duunyo hor kaca, ama qof wax maamula.
Dad & duunyo midkii uu doonaba ha ahaadee hogaamiyaha waxaa looga baahanyahay inuu kasbado hayinnimada dadka ama duunyada uu kolkaa hogaanka u hayo. Kolka hoggaankaasi uu kasbado dad ogol ama duunyo hayin ah, sida sawirka ka muuqata ilma saqiir ah ayaa laba awr hoggaamin kara.
kolkase hoggaamiyuhu uusan kasban dad ogol ama duunyo hayin ah, oday dambe ayaan hal awr ilmaha saqiirka ee uu dhalay midkoodna hoggaamin karin.
•Dad kooban ayuu kalsooni ka haystaa & inta danwadaaga ay yihiin.
•Dhaqaale ayuu ku qanciyaa ama awood ayuu ku muquuniyaa inta xukunkiisa mucaaradsan
•Had & goor waxa uu soo saaraa uu kala tashaday kaliya inta xayn-daabkiisa ku jirta ama uusan cidna kala tashan
•Ma jecla in la mucaarado ama la dhaliilo, wuuna amaan jecelyahay.
•Waa mid kala qoqoba oo qaybiya bulshada.
•Waxa uu iska dhigaa mid dhagaysta bulshada
•Wuxuu iska dhigaa qof aaminsan talo-wadaaga & dimuqraadiyada
•Balse go’aankiisa ayaa u cad marka ay timaado fulinta.
•Dadku ayuu talada la wadaagaa
•Wuxuu ogolyahay in la dhaliilo, la mucaarado, laguna amaano run xigmad & xaqiiq ku salaysan.
•Waa qof u cudur daari kara shacabkiisa hadii uu gaf galo ama hawshii laga sugayay ka gaabiyo ama ku fashilmo
•Dalkiisa & dadkiisa wuxuu la jecelyahay inuu ooga tago horumar iyo wanaag muuqda.